APIE ၏အပိုင်းအစ - နို ၀ င်ဘာ ၂၀၁၉ သတင်းလွှာ - Austin Partners in Education
APIE ၏အချပ်: နိုဝင်ဘာလ 2019 သတင်းလွှာ
ရာသီဥတုအေးလာပြီးမကြာခင်အားလပ်ရက်ရာသီကိုစတင်တော့မယ်။ လာမည့်အပတ်အားလပ်ရက်အားလပ်ရက်များတွင်သင်မဖြည့်မီ APIE အမြန်ဆုံးအချိန်ကိုယူရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများ၊ အလှူရှင်များနှင့်မိတ်ဆွေများထံမှဆက်လက်ထောက်ပံ့မှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်ပတ်လည်အစီအစဉ်၏နောက်ဆုံးစာရင်းဇယားများနှင့် Austin ISD ကျောင်းသားများကိုထောက်ပံ့ရန်သင်၏ Target စျေးဝယ်ခြင်းကိုမည်ကဲ့သို့အသုံးချနိုင်သည်စသည့် APIE နောက်ဆုံးသတင်းများအတွက်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
2019-20 စာသင်နှစ်အတွက်, MCC အစီအစဉ်6နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်th နှင့် 7th Dobie၊ Martin၊ Sadler Means YWLA နှင့် Webb တို့အပါအဝင်အလယ်တန်းကျောင်း (၆) ကျောင်းမှကျောင်းသားများ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Austin ISD ကျောင်းသား ၆၆၉ ဦး အတွက်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်း ၂၀၀ နီးပါးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတမ်းစေတနာ့ဝန်ထမ်းများစွာကိုရှာဖွေနေသည်၊ အထူးသဖြင့်ဇန်နဝါရီလစာသင်ချိန်အသစ်တွင်ဖြစ်သည်။ သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြတစ်ယောက်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသို့လာရောက်ပါ ဝဘ်ဆိုက်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက Ashley Yeaman အား ayeaman@austinpartners.org သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ။
ယခုနှစ်တွင် APIE ၏ကောလိပ်အဆင်သင့်ဖြစ်မှုအစီအစဉ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်းစီစာရင်းတွင်ဘားနက်အလယ်တန်းကျောင်းအားထည့်သွင်းပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ခရိုင်တစ်လွှားရှိအလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်း ၁၁ ကျောင်းတွင်ကျောင်းသားများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၈ တန်း၊ ၉ တန်းနှင့် ၁၀ တန်းကျောင်းသားများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းကောလိပ်အထက်တန်းကျောင်းနှင့် Career Launch / P-TECH အစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ရန်ရှာဖွေနေသည့်ကျောင်းသားများအားကူညီရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ ဤအစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများသည်အထက်တန်းကျောင်းပြီးသည့်အချိန်တွင် Associate ၏ဒီဂရီနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအောင်လက်မှတ်များရရှိရန်အခွင့်အရေးရရှိလိမ့်မည်!
ကျွန်ုပ်တို့တွင် Austin ISD မှကျောင်းသားများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်လမ်းညွှန်ဆရာပေါင်း ၃၀၀ ကျော်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိပြီးအထူးသဖြင့်အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းများတွင်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါကျောင်းများတွင်လမ်းညွှန်သင်ကြားရန်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်လိုအပ်သည်။ Navarro နှင့်အရှေ့မြောက်အစောပိုင်းကောလိပ်အထက်တန်းကျောင်း၊ ဘန်းနက်၊ မန်ဒက်စ်နှင့် Lively အလယ်တန်းကျောင်းများ၊ နှင့် Cowan, Pease, Metz, Sims, -Norman နှင့် Mills ကမူလတန်းကျောင်း။ တစ် ဦး ဆရာဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်, ငါတို့သွားရောက်ကြည့်ရှု ဝဘ်ဆိုက်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက Ashley Yeaman အား ayeaman@austinpartners.org သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ။
GEAR UP အစီအစဉ်သည်၎င်း၏တတိယနှစ်တွင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများသည် ၈ တန်းကျောင်းသားများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Bedichek၊ Burnet၊ Covington၊ Dobie၊ Lively၊ Gus Garcia YMLA၊ Martin၊ Mendez၊ ဒီနှစ်မှာ GEAR UP ကျောင်းတွေမှာကျူရှင်ဆရာ ၂၁ ယောက်ရှိတယ်။ GEAR UP နည်းပြဆရာနှင့်အတူထူးခြားသောအတန်း ၁၃၀ ကျော်ရှိသည်။ နေ့ချင်းညချင်းနှင့်ကျောင်းပြီးချိန်တွင်ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားများသည်စာသင်ခန်းနှင့်အုပ်စုငယ်လေးများလက်ခံရရှိခြင်း၏ပံ့ပိုးမှုများကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
ရာသီဥတုဆိုးရွားနေသော်လည်း Bumble Bizz ကထောက်ပံ့သောအောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ Contigo ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ Back-To-School ပျော်ရွှင်သောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မဲပေးသူများများပြားစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မယုံနိုင်လောက်သောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ဤကဲ့သို့သောကျေးဇူးတင်လေးမြတ်သည့်ပွဲများကျင်းပကြသည်။ မင်းမရှိရင်ငါတို့အလုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူး! အကယ်၍ သင်ဤဖြစ်ရပ်ကိုလွဲချော်သွားပါက၊ နောက်လာမည့်သတင်းများအတွက်သင်၏အီးမေးလ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်များနှင့်ညှိနှိုင်းနေပါ။
စေတနာ့ဝန်ထမ်းမီးမောင်းထိုးပြ | Drew Dubcak
Drew Dubcak ၏ဓာတ်ပုံယဉ်ကျေး။ Tabitha ၏မိသားစုထံမှခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အသုံးပြုခဲ့သည်။
Drew သည်သူမ mentee, Tabitha နှင့်လွန်ခဲ့သောခြောက်နှစ်က6တန်းကျောင်းသူအဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင် Tabitha သည်အငယ်တန်းဖြစ်ပြီးဘွဲ့ရပြီးနောက်နောက်လာမည့်အရာများကိုစတင်စီစဉ်နေသည်။ ဤမေးခွန်းနှင့်အဖြေများတွင် Drew သည်သူမ၏လမ်းညွှန်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်လူတို့ဘာကြောင့်ပါ ၀ င်ရန်တွန့်ဆုတ်မနေသင့်အကြောင်းပိုမိုမျှဝေသည်။
A: ငါ့အဖေကဆယ်နှစ်ကြာသင်ကြားပေးခဲ့ပြီးယခုထိတိုင်သင်ကြားနေဆဲဖြစ်သည်။ ငါကိုယ်တိုင်ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာတကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ငါကောလိပ်တက်ဖို့အချိန်ကတည်းက Tabitha နဲ့လက်တွဲခဲ့တယ်။ သူမအသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်တွင်သူမနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလတွင်အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ခဲ့သည်။
မေး။ ။ မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံလမ်းညွှန်ကယေဘုယျအားဖြင့်ဘယ်လိုရှိသလဲ ဘယ်လိုနှစ်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲသွားပြီလဲ
A: ဒါဟာအံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ Tabitha နဲ့အလုပ်လုပ်တာကအပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားကိုမြင်ဖို့အတွက်နာရီပေါင်းများစွာနာရီထည့်စရာမလိုဘူးဆိုတာပြခဲ့တယ်။ သူမနဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူမကငါ့ကိုမယုံတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါဒီလောက်ကြာကြာနေခဲ့ကတည်းကငါပေါ်လာတဲ့အခါငါဒီကြီးမားတဲ့ပွေ့ဖက်မှုရ။ သူမကြီးပြင်းလာတာကိုတွေ့ရတာအရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ ရယ်စရာကတော့ Tabitha ကကြီးပြင်းချင်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်သူမနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်နှင့်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်သူနှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မယ်။ သူမသည်အလယ်တန်းကျောင်းတက်ရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အထက်တန်းကိုမတက်ချင်တော့ပါ။ သူမကိုကူညီဖို့အဲဒီမှာရှိနေခြင်းဟာတကယ့်ကိုကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပါ။
မေး။ ။ mentee အတူတူအလုပ်လုပ်ရတာဟာရေရှည်အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်မယ်လို့ခင်ဗျားဘယ်လိုထင်သလဲ။
A: ငါလမ်းညွှန်နှင့်အတူထင်, ကိုက်ညီမှုသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ် သငျသညျပတ်ပတ်လည်ကပ်နှင့်နေထိုင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ရန်ရှိသည်။ မင်းရဲ့လုပ်အားတွေဟာရုပ်လုံးပေါ်လာတာကိုမင်းတွေ့မြင်တာပါပဲ။
Q: Tabitha နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတူတကွအလုပ်လုပ်ခဲ့တုန်းကမင်းအတွက်ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိပါသလား။
A: ကောင်းပြီ, ငါမိသားစုကိုသိနှင့်ယခုငါသူမ၏ mom, ကိုငါသိ၏။ ဒါကယုံကြည်မှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးပဲ။ ဒါကြောင့်မနှစ်ကငါနဲ့သူမအစ်မကို Trail of Lights ဆီခေါ်သွားခဲ့တယ်။ သူတို့ဟာ Austin inရိယာမှာသူတို့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးနေထိုင်ခဲ့ကြပေမယ့်ငါနဲ့သူတို့နဲ့အတူပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့လုပ်ခဲ့ရတယ်။ ဒါဟာသူတို့ကိုမြင်နေရုံစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့တွေဟာအသက် ၁၆ နှစ်နဲ့ ၁၇ နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီးဒီမီးလုံးတွေကိုမြင်ရတာကလေးတွေလိုပဲခုန်ပေါက်နေကြတယ်။ လှတယ်
မေး - Tabitha အထက်တန်းကျောင်းပြီးတဲ့အခါသူမဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာစိတ်ကူးရှိသလား။
A: ငါတို့အခုအလုပ်လုပ်နေပြီ။ သူမအနေဖြင့်သူမ၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွေ့အကြုံနှင့်ကောလိပ်တက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်ကြိုးစားနေသည်။ သူမသည်သမိုင်းနှင့်နက္ခတ္တဗေဒကိုချစ်မြတ်နိုးသည်။ ထို့ကြောင့် Tabitha သည်သူမ၏လမ်းစဉ်ရှိပါကတစ်နေရာရာရှိကောလိပ်တစ်ခုတွင်သမိုင်းနှင့်နက္ခတ္တဗေဒပါမောက္ခဖြစ်လိမ့်မည်။
A: သင်ကိုယ်တိုင်အပြင်ထွက်ရခြင်းသည်ကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုတာကအဲဒါကိုလုပ်ဖို့အချိန်သိပ်မယူပါဘူး။ ငါကလူအများကြီးငါ့ကို၌မှီဝဲရထင်, ငါ့ကို, ငါ့ကို။ Tabitha နှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း-ဟုတ်တယ်၊ သူမကိုကျွန်တော်ကူညီခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကိုယ်တိုင်လည်းကူညီခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမကငါ့ကိုသင်ခန်းစာအများကြီးပေးခဲ့တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုအလေးအနက်ထားစရာမလိုဘူး။ သူက“ ဘာလို့မင်းဖုန်းကိုဘာဖြစ်လို့အချိန်မရတာလဲ” ဟုငါ့ကိုမကြာခဏမေးလေ့ရှိသည်။ ဒါကသူမဆီကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးမေးခွန်းပါ။ “ ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ” သူမကပြောလိမ့်မယ် သင်သည်သင်၏ mentee ထံမှသင်ခန်းစာများစွာသင်ယူနိုင်ပြီးသူတို့ဘဝတွင်သင်နေထိုင်ခြင်းထက်သူတို့၏ဘဝတွင်နေထိုင်ခြင်းသည်အခွင့်ထူးတစ်ခုဖြစ်သည်။
မေး: လမ်းညွှန်သင်ပေးရန်တွန့်ဆုတ်နေသူတစ် ဦး အားသင်မည်သို့အကြံဥာဏ်ပေးမည်နည်း။
A: ခက်ခဲတဲ့စကားဝိုင်းတွေကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာမသိတဲ့နေရာမှာတွန့်ဆုတ်နေတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် APIE ကိုအထောက်အပံ့အများကြီးပေးခဲ့တယ်။ ငါကလိုအပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါထွက်ရောက်ရှိနိုင်ဘူး။ ငါသင်တန်းများနှင့်ပတ်သက်။ အီးမေးလ်များကိုရတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အကူအညီလိုအပ်ပါက Dawn [APIE ၏ကျောင်းဆက်သွယ်ရေးမန်နေဂျာ Lewis] ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ နှင့်ထောက်ခံမှုန်ထမ်းသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာထောက်ခံမှုတွေအများကြီးရှိတယ်, ဒါကြောင့်သင်တစ် ဦး တည်းဘယ်တော့မှမ။ အကယ်၍ သင်ကကလေးတစ်ယောက်နှင့်မကိုက်ညီလျှင်၊ သင်နှင့်လည်းအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အခြားကလေးတစ် ဦး ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။
မေး။ ။ Tabitha အပေါ်ဘယ်သက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့မျှော်လင့်လဲ။
A: သူမကြီးပြင်းလာပြီးသူမအတွင်းပိုင်း၌ရှိနေသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသောလွတ်လပ်သောအမျိုးသမီးဖြစ်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ သူမလိုချင်တာကိုသူမလုပ်နိုင်တာကိုသူမသိစေချင်တယ်။ သူမကသူမကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တာတွေလုပ်ဖို့သင်ပေးတယ်။ သူမသည်သူမဟာကောလိပ်တက်ချင်သောအံ့သြဖွယ်သမိုင်းနှင့်နက္ခတ္တဗေဒပါမောက္ခဖြစ်နိုင်သည်။ သူမသည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ခရီးသွားနိုင်ပါတယ်။ သူမသည်သူမကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်သည်။ သူမသည်သူမ၏နောက်ကွယ်မှတစ်စုံတစ် ဦး ကိုရှိသည်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ သူမသည်ကြောက်စရာမလိုပါ။ သူမသည်သူမလိုချင်သောအရာများအတွက်သွားသောလွတ်လပ်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး အဖြစ်ကြီးပြင်းလာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
APIE သည် Austin မာရသွန်၏တရားဝင်အလှူငွေအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသည့်အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအမြတ်အစွန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်တို့သည် ၁TP2T30,000 ကျော်မြှင့်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၂၀၂၀ ရည်မှန်းချက် $30,000 ၏ရည်မှန်းချက်သည်သင်္ချာကျောင်းသား ၆၀ အတွက်သင်တန်းပို့ချခြင်း၊ ကျောင်းသား ၁၂၀ အတွက်လမ်းညွှန်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်ကျောင်းသား ၃၀ အတွက်ကောလိပ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်းကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ဤစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသည် APIE ၏အဓိကနှစ်ပတ်လည်ရန်ပုံငွေရှာသူဖြစ်ပြီးသင်အောက်ပါတို့ဖြင့်သင်ကူညီနိုင်သည်။
အပြေးအကယ်၍ သင်ဟာအပြေးသမားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး Austin Marathon၊ ½ Marathon or 5K ကို run မယ်ဆိုရင်သင်၏ပြေးပြိုင်မှုကို APIE အတွက်ရန်ပုံငွေရှာဖွေရန်နှင့် APIE အတွက်ရန်ပုံငွေရှာဖွေရန်စဉ်းစားပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GoFundMe စာမျက်နှာကိုသွားပါ ဒီမှာ “ Run for Charity” ကိုနှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းသို့လာရောက်ခြင်း - အပြေးသမားမဟုတ်လား ပြဿနာမရှိပါဘူး! APIE ၏အဖြစ်အပျက်ကိုမိတ်ဆွေများ၊ မိသားစုများနှင့်ရန်ပုံငွေရှာဖွေရန်နှင့်ဝေငှရန်သင်အသင်းအဖွဲ့တွင်ပါ ၀ င်နိုင်သေးသည်။ သင်၏ကွန်ယက်၏ရက်ရောမှုကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်တည်းသာပို့ရန်သို့မဟုတ်ပို့ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့စိန်ခေါ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GoFundMe စာမျက်နှာကိုသွားပါ ဒီမှာ “ Run for Charity” ကိုနှိပ်ပါ။ (ဒါကမင်းကိုငါတို့အဖွဲ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ရန်ပုံငွေရှာနိုင်ပေမဲ့မာရသွန်ပြေးရန်မလိုပါ။ )
လှူဒါန်းသည် အထက်ဖော်ပြပါရွေးချယ်စရာများသည်သင့်အတွက်အသုံးမပြုပါကအပတ်စဉ်ပြသသောကျောင်းသားများအတွက်သင်လှူဒါန်းနိုင်သည်။ APIE ၏အစီအစဉ်များသည်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေကြောင်း၊ APIE သည်အကျိုးအမြတ်မယူသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၏ပံ့ပိုးမှုမပါဘဲကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုသင်နားလည်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GoFundMe စာမျက်နှာကိုသွားပါ ဒီမှာ ပြီးလျှင်“ SupportaCharity” ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်“ Austin Partners in Education” ကိုရွေးချယ်ပါ။
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက Rachel Thomson ကို rthomson@austinpartners.org သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ။
သင်၏ Target စျေးဝယ်ခြင်းက APIE ကိုကူညီနိုင်သည်
Target မှထောက်ပံ့သောငွေကြေးထောက်ပံ့သောအထူးကုသိုလ်ဖြစ်လှူဒါန်းခြင်းအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းခံရကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကြေငြာရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ ထို့အပြင်သင်၌ Target မှလှူဒါန်းမှုအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အားကူညီရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ သင် Target တွင်အွန်လိုင်းနှင့်ဆိုင်များတွင်သင် ၀ ယ်သည့်အခါတိုင်းမဲရရှိသည်။ ယခုဇန်နဝါရီ ၅ ရက်မှစ၍ Target Circle အစီအစဉ်မှတဆင့် Target ၏လှူဒါန်းမှုများအားမည်ကဲ့သို့ခွဲဝေမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်မဲပေးပါ။ ကိုနှိပ်ပါ ဒီမှာ Target Circle အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်ပတ်လည်အကဲဖြတ်မှုအစီရင်ခံစာမှတွေ့ရှိချက်အချို့ကိုမျှဝေခွင့်ရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်တို့၏သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြအစီအစဉ်သည်အလယ်တန်းကျောင်းသားများနှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ 582 8th ပရိုဂရမ်တွင်ပါ ၀ င်သောကျောင်းသားများသည်နှိုင်းယှဉ်ထားသောအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားသောပညာရေးဆိုင်ရာရလဒ်များရှိခဲ့သည်။ 2019 ခုနှစ်တွင် APIE 8 ၏ 79%th အတန်းသင်္ချာကျောင်းသားများသည်နှိုင်းယှဉ်အုပ်စု၏ 61 % နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက STAAR အောင်လက်မှတ်ကိုရရှိခဲ့သည်။
APIE ၏ကောလိပ်အဆင်သင့်ဖြစ်မှုအစီအစဉ်သည် ၈ ယောက်မှကျောင်းသား ၅၈၃ ဦး ကိုထောက်ပံ့ခဲ့သည်th 12 ကနေတဆင့်th အဆင့်။ ပရိုဂရမ်တွင်ပါ ၀ င်သောသက်ကြီးရွယ်အို ၂၅၄ ယောက်တို့သည်ပြည်နယ်၏ကောလိပ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်မှု၊ တက္ကဆက်ရှိအောင်မြင်မှုရရှိမှုဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနှိုင်းယှဉ်နှိုင်းယှဉ်သောအုပ်စုနှင့်ခရိုင်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ APIE ပါ ၀ င်သူများ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်နှစ်ခုလုံးအတွက်ကောလိပ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်မှုစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ထို့နောက်လိုက်ဖက်သောနှိုင်းယှဉ်မှုအဖွဲ့မှ ၂၁၁TP1T ရှိသည်။
The အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံ နှင့် စီမံကိန်း၏အဓိကအချက်အလက်များ “ ရလဒ်” tab အောက်ရှိ APIE ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရနိုင်သည်။